Zawgyi Keyboard on iPhone test version — MYSTERY ZILLION
Zawgyi Keyboard on iPhone test version
မကြာခင်မှာတော့ full version ရနိုင်မှာပါ။ အခုတော့ စမ်းကြည့်လိုက်တာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ key တွေ ထည့်ရအုံးမယ်။ သုံးလို့ရအောင်တော့ နည်းနည်းတော့ ကြာလိမ့်မယ်။ ဒီလ မကုန်ခင်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဗျာ။ ဇော်ဂျီ keyboard ရသွားရင် iPhone to Windows Mobile or iPhone ကို SMS ကို မြန်မာလို ပို့လို့ရမယ်။ Windows Mobiles to iPhone or Windows Mobile ကိုလည်း SMS မြန်မာလို ပို့လို့ရသွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ နောက်ပြီး website တွေကိုလည်း မြန်မာလို ကြည့်ရုံသာမက မြန်မာလိုပါ ရိုက်လို့ရလာမှာပါ။
good news...:) i am waiting..
အင်း... Window Mobile နဲ့ IPhone တစ်ခုခုဝယ်ချင်အောင် လုပ်နေပြန်ပြီ ခက်တယ် IPhone ဝယ်ရအောင်လည်း ဘိုင်ပြတ်နေတယ် Window Mobile လေးပဲဝယ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါဦးမယ် ကုန်ပေါက်တွေတော့ စလာပြီထင်တယ်
Try it ko Saturn.May I help U?:D:D:6::6:
လန်းတယ်ဟေးး.. ထပ်ပီးကြိုးစား.. ကိုစေတန်ရေးးးးး
လိုအပ်ရင်.. ကျတော်လဲကူညီပေးမယ်နော်... (အားလုံးအတွက်ဆိုရင်.. အဆင်သင့်ပဲ)
အခုတော့ keyboard layout ကို ဆွဲနေတုန်းပဲ။ ရိုက်ရလွယ်အောင်ပေါ့။ windows က keyboard တွေနဲ့တော့ တူတော့မှာမဟုတ်ပဲ ရိုက်ရလွယ်တဲ့ ပုံပြောင်းမလို့
iPhone/iPodTouch can support Zawgyi. So, Why can't use SMS when we have keyboard :P ?
Symbian OS အတွက်ရောအစီအစဉ်ရှိဘူးလားကိုစေတန် အိုင်ဖုန်းတွေ၀င်းဒိုးမိုဘိုင်းတွေအနားမကပ်နိုင်လို့ပါဗျာ
နို့ကုလားက မျှော်လင့်ချက် သိပ်မရှိဘူး.. :d
ဘယ်တော့ ရနိုင်မလဲဟင်.. ဟီး.. ကိုင်နိုင်လို့တော့ ဟုတ်ဘူး.. အနော့်ဘလော့ခ်မှာ တင်ချင်လို့..
အခုတော့ ထွက်ဖို့တော်တော်လေးကို နီးစပ်နေပြီ။ logic ပိုင်းပြီးရင်ပြီးပြီ။ technique ပိုင်းက ပြီးသွားပြီ။
မြန်မြန်လုပ်ပါဗျို့ :d သုံးချင်လွန်းလို့...
ဒီည သို့မဟုတ် မနက်ဖြန်ညတော့ ထွက်မယ်ထင်တယ်။ အခု draft level နောက်တဆင့်တင်ပေးလိုက်တယ်။ keyboard ရိုက်ရတာလွယ်အောင် စဉ်းစားနေတာ ကြာနေတာ။
ကိုစေတန်ရေလုပ်ပါဗျို့အတင်းကိုကျေးဇူးတင်မယ်ဗျို ့
ကျွန်တော်တို့ ဒီည အပြီးသတ်နိုင်မယ်လို့ မျော်လင့်တယ်။
1) Texts နဲ့ Shift Texts တွေကို နဲနဲ ပြန်ပြင်ချင်တယ်။
2) Number ကိုစဉ်းစားရမယ်။
3) English Keyboard နဲ့ ငြိပြီး ကြောင်နေတာကို ပြန်ထိန်းရမယ်။
4) Shift Key ကို auto on မလား၊ off မလား
ကျွန်တော်ကတော့ လောလောဆယ် ဒီ Issue လေးခုပဲ စဉ်းစားလို့ ရသေးတယ်။
I'm expecting this iphone keyboard to come out. I'm really thanks for the work.